Lanonana fisaorana sy fankasitrahana.
Published Date: 13 mai 2022
📸 Pejy an-tsary 13 Mey 2022.
⚖️ Lanonana fisaorana sy fankasitrahana an’i A/toa RAJAONA Andriamanakiandrianana, Filoha Voalohany eo anivon’ny Fitsarana Tampony (PPCS) sy i R/toa RALAIVELO Marie Noëline , Tonia Mpampanoa Ambony eo anivon’ny Fitsarana Fandravana (Cour de Cassation) izay handeha hisotro ronono.
Nitarika sy nanome voninahitra ny fotoana i A/toa RAKOTOZAFY François, Mpitahiry ny Fitombokasem-panjaka­na, Minisitry ny Fitsarana.
Atrikasa fanavaozana ny rejistrin’ny antoka ho lasa ara-kajimirindra eto Madagasikara.
Published Date: 12 mai 2022
📸 Pejy an-tsary 12 Mey 2022.
⚖️ Atrikasa fanavaozana ny rejistrin’ny antoka ho lasa ara-kajimirindra eto Madagasikara.
📌 Ilaina ny manaraka ny toetr’andro, efa mivoatra ny zava-drehetra ka izany no nanantontosana ny atrikasa anio 12 Mey 2022 tao amin’ny NOVOTEL izay mikasika ny Fanavaozana ny Rejistrin’ny Antoka amin’ny fampindramam-bola ho lasa ara-kajimirindra eto Madagasikara izay nokarakarain’ny Ministeran’ny fitsarana miaraka amin’ny firaha-miasa amin’ny Banky Iraisam-pirenena, ny Banky foiben’i Madagasikara ary ny Ministeran’ny Toekarena sy ny fitantanam-bola.
➡️ Tanjona ny hananan’ny Firenena rafitra ara-pitantanam-bola sy ara-pitsarana mahomby eo hanatrehan’ny lafiny ekonomika.
💡 Atolotra anao ny fanazavana entin’ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana A/toa RAKOTOZAFY François sy ny Mpitsara tompon’andraikitra eo anivon’ny Foibem-pitondrana ny raharaham-pitsarana, A/toa RAKOTOMALALA Mamy Njatoson.
Fananganantsaina teto amin’ny Ministeran’ny Fitsarana Faravohitra.
Published Date: 9 mai 2022
📸 Pejy an-tsary 09 Mey 2022
🇲🇬 ⚖️ Fananganantsaina teto Faravohitra izay notarihanan’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjaka­na, Minisitry ny Fitsarana A/toa RAKOTOZAFY François, niarahana tamin’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny sy ny mpiara-miasa rehetra.
Lanonam-panokafana ny fivoriana ara-potoana voalohany amin’ity taona 2022 ity.
Published Date: 3 mai 2022
📸 Pejy an-tsary 03 Mey 2022
➡️ Lanonam-panokafana ny fivoriana ara-potoana voalohany amin’ity taona 2022 ity.
⚖️ Tonga nanatrika sy nanome voninahitra izany fotoana izany ny Mpitahiry ny Tombokasem-panjakana­, Minisitry ny Fitsarana A/toa RAKOTOZAFY François.